Ogaden News Agency (ONA) – Qaban-Qaabada Qabsoomida Kal Fadhigii Golaha dhexe ee JWXO oo si wayn looga dareemayo Qabridahar.
Qaban-Qaabada Qabsoomida Kal Fadhigii Golaha dhexe ee JWXO oo si wayn looga dareemayo Qabridahar.
Posted by Cabdalla Cabdalla	/ April 14, 2019
Waxaa magaalada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay siwayn uga socota qabanqaabada kalfadhiga Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ee lagu wado in uu kafurmo magaalada Qabridahare.
Xubnaha Unugta JWXO ee magaalada Qabridahare iyo dadka shacabka ah ee kudhaqan Magaalada oo gacmaha is haysta ayaa kuhowlan sidii uu uqabsoomi lahaa kalfadhiga Golaha Dhexe ee JWXO oo furmi doona maalinta bari ah ee Isniinta ah hadii Alle Idmo.
Maamulka Gobolka Qoraxay iyo kan Dagmada Qabridahare ayaa dhankooda qayb libaax kaqaatay sidii uu uqabsoomi lahaa kulanka Golaha Dhexe iyo martida kale ee loo calaamadiyay in uu magaalada Qabridahare kaqabsoomo.
Bilicda magaalada iyo waliba amaanka ayaa aad looga shaqeeyay waxayna magaaladu udiyaarsan tahay in ay Marti galiso wufuuda badan ee shirka kasoo qayb gali doona, kuwaas oo isugu jira xubnaha JWXO iyo Marti sharaf aad ubadan.
Kalfadhiga Golaha Dhexe ee JWXO oo Bari furmidoona hadii Alle Idmo kala soco Wakaalada Wararka Ogadenia ONA.